Home Wararka Villa Somalia oo Deni qalalaase siyaasadeed dhexda ka gelisay
Villa Somalia oo Deni qalalaase siyaasadeed dhexda ka gelisay
Diidmo ka dhan ah wax ka bedelka xeer-hoosaadka baarlamaanka Puntland ayaa ka dhex-bilaabatay iyadda oo mudaneyaal ay bilaabeen in ay kor u hadlaan ayaga oo sharci darro ka dhigaya “dib-u-habeyntaas”.
Qodobada muranka ka taagan yahay ee isbedelkan qeybta ka ah waxaa ugu mudan in Afhayeenka, ku xigeenadiisa iyo Xildhibaan kasta uu xilkiisa/xilkooda ku wayn karaan marka mooshinka laga gudbiyo ay taageeraan 44 mudane.
“Xeer kasta iyo qodob kasta oo uu qof la yimaado hadduu dastuurka ka hor imaanayo waa waxbo kama jiraan” – Xildhibaan Axmed.
Sharci-dejiyeyaasha kasoo horjeeda waxaa ka mid ah Xildhibaan Axmed Cabdiraxmaan Jaamac (Axmad Kuluc ) kaas oo sheegay in ansixinta xeerkan aanan loo marin dastuurka.
“Xeer hoosaadkan hadda la baddalay ama golaha la keenay oo anaga aaminsanahay in sida wax u dhaceen ay khaldanaayeen, sharciyada ay baalmarsan yihiin,” ayuu yiri mudanaha oo u waramay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da.
Mr Kuluc oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ku dooday in meelmarinta xeerkan aanan loo marin hanaan sax ah isla markaana ay waxbo kama jiraan kasoo qaadayaan.
“Laakiin xeer kasta iyo qodob kasta oo uu qof la yimaado hadduu dastuurka ka hor imaanayo waa waxbo kama jiraan,” ayuu Xildhibaanka hadalkiisa ku daray.
“Tani shacabka ma aqbali karaan”
Sidoo kale, Xildhibaanka ayaa intaas ku daray in qodobka ay kasoo horjeedaan uu kamid yahay mid xeerinaya in xildhibaanada soo mara maamulka Puntland ay wax ku qaadan karaan wax la yiraahdo ‘maamuus’.
“Waaggii hore sidii xeerkii ku qornaa haddii guddoonka baarlamaanka uu wakhtigiisii dhamaado wuxuu lahaan jiray wax la yiraahdo maamuus, hadda waxaa ku qoran xeerkan in 66-ka xildhibaan ay maamuus leeyihiin, guddoonka, labada ku xigeen iyo baarlamaanka oo dhanba,” ayuu intaas ku daray.
Doodaha ay cuskanayaan dhinacyadda kasoo horjeeda isbedelkan waxaa kamid ah in dhaqaale aan loo heyn in xildhibaan kasta soo mara baarlamaanka Puntland uu gunno ka helo dowladda.
“Lama rabo inta uu qofka guriga fariisto uu yiraahdo waa baarlamaanka soo maray, lacag baa halkaa iiga soo dhaceysaa taas shacabka Puntland ma aqbali karaan,” ayuu xusay.
Ugu dambeyntii, Xildhibaanka ayaa caddeeyay in haddii laga gudbi waayo khilaafkan ka dhashay ansixinta xeerkan in maxkamadda ay geyn doonaan si arrinta loo soo afjaro.
Dhanka kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya in Madaxtooyadda Puntland aysan ku qanacsaneyn isbedelkan. Hase ahaatee, illaa haatan ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska ugu sareeya maamulkan ka tirsan dowlada federaalka ah.